मुस्ताङ खबर : कागबेनीमा घुम्ती शिविर / गाउपालिकाको उद्घाटन ! – ebaglung.com
मुस्ताङ खबर : कागबेनीमा घुम्ती शिविर / गाउपालिकाको उद्घाटन !
२०७३ चैत्र १४, सोमबार ०६:२८	अन्य समाचार
केशव वि.क. मुस्ताङ, २०७३ चैत १४ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको आयोजना तथा संयोजनमा बाह्र गाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको केन्द्र कागबेनीमा हालै एक दिने एकिकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण कार्यालयले दिने सेवा सुविधा जनताको घरदैलोमा उपलब्ध गराउँनको लागि एकिकृत घुम्ती शिविरको आयोजना गरीएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
घुम्ती शिविरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, सिंचाई विकास सवडिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल र मुस्ताङ सामुदायिक आँखा केन्द्र लगायतले गाउँस्तरमा आफ्ना सेवा सुविधा उपलब्ध गराएका थिए ।
शिविरमा १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरीएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमराज पोखरेलले जानकारी दिए । जिल्लामा धाएर पाउने सेवा सुविधा गाउँमै उपलब्ध हुँदा स्थानिय एकदमै खुःशी भएका थिए । जिल्ला नापी कार्यालयबाट १० जनाले सेवा लिएको नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले बताए । शिविरमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ११० जनालाई बिउ, विषादी वितरण तथा प्राविधिक सल्लाह सुझाव दिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सावित्री बरालले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट ११४ जनाले सेवा लिएका थिए । कार्यालयले २०४ वटा गाई, २५६७ वटा बाख्रा, ३६ वटा घोडा र ४६ वटा कुखुराको लागि विभिन्न औषधी वितरण गरेको थियो । वर्षे घाँस (टियोसेन्टी) को विउ प्रतिव्यक्ति १ केजीका दरले २९ जनालाई र बाह्य परजिवि नियन्त्रणको औषधी ३३ जना किसानलाई वितरण गरेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुबल शाहले बताए ।
त्यस्तै महिला तथा बालबालिका कार्यालयले ३७ जना पुरुष र ३७ जना महिलालाई जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरेको महिला विकास निरिक्षक सरिता थकालीले जानकारी दिइन् । मुस्ताङ सामुदायिक आँखा केन्द्रको आँखा शिविरमा १२१ जनाले आँखा जाँच गरेका थिए । भने ११९ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरीएको मुस्ताङ अस्पतालले जनाएको छ ।
सो अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम र विपद व्यवस्थापन सचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । कार्यक्रम उपलब्धी मुलक रहेको स्थानियले बताएका छन् ।
यसैवीच जोमसोममा करेन्ट लागेर एक जना घाइते भएका छन् । साविकको बागलुङ जिल्ला निसी गाविस ७ का २७ वर्षिय सन्तोष घर्ति मगर करेन्ट लागेर घाइते भएका हुन् ।
जोमसोमको पक्की पुल निमार्णमा निर्माणको काम गरीरहेका मगरलाई रड उठाउने क्रममा दिउँसो २ः१५ बजे बिजुलीको तारमा रडले छुँदा करेन्ट लागेको बताइएको छ । मगरको दाइने हातको हत्केला र दाइने खुट्टाको गोली गाँठोमा हल्का चोट लागेको छ ।
करेन्ट लागी घाइते भएका मगरको जिल्ला अस्पताल जोमसोममा उपचार पश्चात निवासमा फर्किएका छन् ।
उता मुस्ताङ जिल्लाको बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई स्वागत÷पदस्थापन तथा कार्यालयको उद्घाटन गरीएको छ । बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउपालिकाको कार्यालय साविकको जोमसोम गाविसको कार्यालय जोमसोममा कार्यलयमा वोर्ड राखिएको हो ।
कार्यालयको उदघाटन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमराज पोखरेलले अहिलेको गाउँपालिका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त भएको शक्तिशाली भएकाले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी रविन्द्र तिवारीले कर्मचारी सहजकर्ता भएकाले गाउँपालिकामा कर्मचारीलाई सहयोग गर्दै विकास निर्माणका कामहरु अगाडी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोविन्द सिग्देलले कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको र यसमा सबैको साथ चाहिने कुरा उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति न्हुर्वु गुरुङले गाउँपालिकामा विकासको लहर भित्राउन राजनैतिक दल तथा स्थानियको साथ समर्थनको कमि नहुने बताए ।
कार्यक्रम निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी रविन्द्र तिवारीको अध्यक्षता र साविक कागबेनी गाविसका गाविस सचिव यज्ञप्रसाद शर्मा गोतामेको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
जोमसोममा डढेलो नियन्त्रण अन्तरक्रिया: प्रकृतिको संरक्षण गर्न डढेलो नियन्त्रण जरुरी !
गायिका शाहको गुनासो : कसमै तोडी जानेलाई के भन्नु र खै ? (भिडियो)